बालसाहित्य प्रतिष्ठान नेपाल: Childhood Days Memories of Senior Writer Shreeom Rodan श्रीओम रोदनको बाल्यकालको कथा
Childhood Days Memories of Senior Writer Shreeom Rodan श्रीओम रोदनको बाल्यकालको कथा
श्रीओम श्रेष्ठ रोदन वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ । उहाँले नेपाली साहित्यको निवन्ध, लघुकथा, नियात्रा लेखन र सम्पादनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ । नेपाली साहित्यको राष्ट्रिय पत्रिका मधुपर्कका सम्पादकसमेत रहनुभएका रोदनले साहित्यिक पत्रकारिताका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य योगदान गरिरहनुभएको छ ।
यस अंकमा हामीले यिनै मिलनसार, मायालु र सह्रदयी वरिष्ठ लेखक रोदनको बाल्यकालका सम्झनाहरु प्रस्तुत गरेका छौं । उहाँ आफ्नो सम्झना सुनाउँदै भन्नुहुन्छ :
म वि.सं. २०१९ साल लक्ष्मी पूजाको दिन ललितपुरको झम्सीखेलमा जन्मिएको हुँ । म बुवा शिवप्रसाद र आमा दिलकुमारीको माइलो छोरा हुँ । म एउटा साधारण परिवारमा जन्मिएको हुँ । मेरो परिवारमा सातजना हुनुहुन्छ । चारजना दाजुभाइ र एउटी दिदी अनि बुवाआमा हुनुहुन्छ ।
पाँचजना छोराछोरी एउटा बुवाको जगिरले पालिन हामीलाई त्यो बेला गाह्रो थियो । त्यही भएर होला हामी पाँचै जना छोराछोरीले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न पाएनौं । मैले घर नजिकै सानेपामा रहेको टीकाविद्याश्रम स्कुलमा पढें । मेरो औपचारिक शिक्षा त्यो विद्यालयबाट सुरु भए पनि बुवाको जागिरको कारणले गर्दा कहिले भद्रपुर, कहिले बिराटनगर, कहिले जनकपुर, कहिले बीरगन्ज आदि ठाउँमा पुगेर मैले विद्यालय फेरी-फेरी पढें ।
त्यो बेला बुवा नेसनल ट्रेडिङमा काम गर्नुहुन्थ्यो । त्यसो भएको हुनाले धेरैवटा विद्यालयमा पढ्दा पनि म एक कक्षाको एक कक्षामै रहेको अनुभव पनि मैले गरेको थिएँ । किनकि त्यो बेला बुवाको एक वर्षभत्रै तीन चारवटा ठाउँमा सरुवा हुने भएर मेरो पढाइ त्यस्तो भएको थियो । यसरी घुमेर पढ्न पाएकोमध्ये मलाई जनकपुरको गंगाधाममा रहेको विद्यालयमा पढेको याद अझै पनि आउँछ । त्यो विद्यालय एउटा पाटीमा चलाइएको थियो । पाटीमा माथि छत त थियो तर दायाँ बायाँ सबै खुला थियो । त्यही बसेर हामी पढ्थ्यौं । पढ्ने पाटी छेउमै गंगा सागर नाम गरेको ठूलो पोखरी थियो । त्यो बेला हामी सिलेटमा लेख्दै पढ्थ्यौं । कहिलेकाही सिलेट धेरै फोहोर भयो त्यही छेउको पोखरीमा चप्लङ् चोपेर सफा गर्ने गर्दथ्यौं ।
म स्कुल पढेदेखि नै पसलमा बस्ने गरेको थिएँ । बुवाले जागिर खाएको पैसाले मात्र परिवार धान्न गाह्रो भएपछि हामीले पसल खोलेका थियौं । मैले स्नातक बी.ए.सम्म पढुन्जेल पनि पसलमा धेरै समय दिएँ । त्यो बेला पसलको लागि सामान साइकलमा राखेर ल्याउँदा साथीहरुले देख्दा मलाई नमज्जा पनि लाग्थ्यो । के सोचे होलान् भन्ने पनि सोच्थें । तर म आफ्नो काम आफै गर्नर्ुपर्छ भन्ने स्वभावको मान्छे थिएँ । आफू जस्तो छु त्यो सत्य कुरा साथीहरुबाट लुकाउँन मलाई मन पनि लागेन । यही कारणले गर्दा पढाइमा पनि खट्ने र पसलमा पनि खट्ने मेरो बानी बस्यो । मेरो यो बानीलाई साथीहरुले पनि मनपराएको मैले अनुभव गरेको छु ।
मेरो विद्यालय र कलेज जीवनमा म अतिरिक्त क्रियाकलापमा चर्चित विद्यार्थी थिएँ । कथा, कविता लेख्ने र नाटक खेल्ने भएकाले सबै विद्यार्थीहरुले मलाई चिन्थे । म स्कुल र कलेज जीवनमा त हिरो नै थिएँ । केटी साथीहरु पनि थुप्रै थिए । सबैको माझमा म प्रीय प्यारो पनि थिएँ ।
वास्तवमा त्यो बेला मैले धेरै दुःख गरेर पढेको हुँ । मैले कक्षा एकदेखि स्नात्तकोत्तर एम.ए.सम्मको पढाइ नै दुःख गरेर पूरा गरेको हुँ । मेरो परिवारका सबै जनाले मैले जस्तै दुःख गरेर पढेका हुन् । दुःख गरेर परिश्रम गरेर भएपनि पढ्यो भने राम्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुराको गतिलो पाठ मेरो जीवनले नै मलाई सिकाएको छ जस्तो मलाई लाग्छ ।
Children's Poetry by Senior Writer Boond Rana गुज...
Children's Play by Krishna Shaha 'Yatri' हारुनको...
Childhood Days Memories of Senior Writer Shreeom R...
Children's Story by Bidhya Sapkota 'Nirjala' पारु
By Shlesma Chhetri, USA भगवानको घर कहाँ छ ?
With an experience of more than two decades in children's writing, Kartikeya has mastered with sophistication all the fine nuances o...